वैशाख शुक्ल पूर्णिमा र घाटु नृत्य नाटिका – Magar Studies Center
Posted on June 12, 2021 June 12, 2021 by magarstudiescenter
नेपालपत्र, प्राध्यापक डा. जगमान गुरूङ, २५ बैशाख २०७७, बिहिबार
वास्तवमा घाटु वसन्त ऋतुमा गाइने एउटा राग हो । नेवारहरुको दाफा भजनमा पनि वसन्त ऋतु अर्थात् चैत-वैशाखमा घाटु गाउने चलन छ । बङ्गालका बोटेहरुले पनि वसन्त ऋतुमा घाटु गाउँदै डुङ्गा खियाएर रमाइलो गर्छन् भन्ने सुनेको छु । अहिले यहाँ चर्चा गर्न लागिएको घाटु चाहिँ गण्डकी प्रदेशका गुरुङ, मगर, दरैँ, कुमाल र थारु समुदायमा प्रचलित नृत्य नाटिका हो । घाटुको आफ्नै कथावस्तु छ । त्यसकारण घाटु केवल नृत्य मात्र नभएर लौकिक नाटिका हो ।
तनहूँको कुन ठाउँमा हो ? ठकुरीहरुले घाटु नाच्छन् भन्ने सुनेको छु । यसैगरी त्रिशूली नुवाकोटका गुरुङहरुले घाटु नचाउन छोडेको हुँदा त्यहाँ बाहुनहरुले घाटु नचाउन थालेकाछन् भन्ने सुनेको छु । यो कुन ठाउँमा हो ? पत्ता लगाउन पर्नेछ । गुरुङहरुले घाटु नाच्न छोड्नु, बाहुनहरुले घाटु नचाउन थाल्नु, माल पाएर पनि चाल नपाउनु भने कै यही हो । यसरी नै एकातिर संस्कृति मासिदै जान्छ र अर्कोतिर संस्कृति पुष्टिँदै जान्छ । अनि फलाना ढिकानाले हाम्रो संस्कृति मास्यो भनेर विरोध गर्छन्, आफ्नो कमी कमजोरीको ख्याल गर्दनन् ।
वास्तवमा घाटु वसन्त ऋतुमा गाइने एउटा राग हो । घाटु चाहिँ गण्डकी प्रदेशका गुरुङ, मगर, दरैँ, कुमाल र थारु समुदायमा प्रचलित नृत्य नाटिका हो । घाटु केवल नृत्य मात्र नभएर लौकिक नाटिका हो ।
px घाटु न्रुत्य नाटिकाको चरित्र बिचार गर्दा शास्त्रीय गीत र नृत्य कै लौकिक प्रस्तुति घाटु हो भन्ने बुझिन्छ । राग र तालमा कस्तो शक्ति हुन्छ र यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष अनुभव घाटुमा गर्न पाइन्छ । घाटुमा राग र तालबाट नै घाटुनीहरुमा देवता चडाइन्छ र राग र तालबाट नै विसर्जन गराइन्छ । यो नै घाटुको करामत हो ।
सती घाटु र बाह्रमासे घाटु गरि घाटु दुई प्रकारका छन् । सती घाटु यस नृत्य नाटिकाको अधिकारिक भाग हो । यसैमा घाटुको कथावस्तु फलाकिन्छ । सती घाटुका गायक र नर्तकीहरु सबै महिला हुन्छन् । सती घाटुमा मादल बजाइँदैन । केवल हातको थपडी मात्र बजाउन्छ ।
बाह्रमासे घाटु यस नृत्यको प्रासाङ्गिक भाग हो । सिकार खेल्ने, धानको रोपाइँ गर्ने, फूलको गीत आदि बाह्रमासे गीत हुन् । बाह्रमासे घाटुमा पनि सती अथवा नृत्यको मुख्य अधिकारिक भागको पनि मन्चन गरिन्छ । बाह्रमासे घाटुका गाउने र बजाउनेहरु सबै पुरुष हुन्छन् । घाटुनीहरु चाहिँ कन्या कुमारीहरु हुन्छन् ।
यलल, ढिले र चम्के गरी घाटु गीतका तीन थरी लय हुन्छन् । यलल भनेको राग हो । यलल भाकामा मादल र थपडी बजाइँदैन । देवताको आह्वान गर्ने, विसर्जन गर्ने र सतीका मुख्य मुख्य भागहरु यलल अथवा रागमा प्रस्तुत गरिन्छ । ढिले भनेको विलम्वित अथवा ढिलोगरी गाउने र नाच्ने गीत हो । चम्के चाहिँ द्रुततर अथवा चम्किलो पाराले गाउने र नाच्ने गीत हो । ढिले र चम्के दुवैमा मादल र थपडी बजाइन्छ ।
हिउँचूली, वरचूली, देउचूली र गङ्गाचूली गरि घाटुका चारवटा देवता छन् । हिउँचूली र गङ्गाचूली अन्नपूर्णहिमालमा छन् । कास्कीको घान्द्रुङबाट पूर्व-खिनमा हिउँचूली र गङ्गाचूली अवस्थित छ । वरचूली र देउचूली महाभारत पर्वतमा अवस्थित छ । नवलपुरको कावासोतिबाट उत्तरतिर वरचूली र देउचूली देखिन्छ । वरचूली पूर्वतिर र देउचूली पश्चिममा पर्दछ । देउचूली भन्दा वरचूली अग्लो छ । त्यसकारण वरचूलीलाई दिदी र देउचूलीलाई बहिनी मानिन्छ ।
देउचूली र वरचूलीमा चूलीबोजा र टेडिबोजा नामका मगर गाउँ छन् । यही चूलीबोजा बरालको आँशु पद्य संग्रहका सर्जक बहादुरसिंह बराल मगर र वहाँका छोरा पूर्व आइजिपी खड्गजित बराल मगरको थात थलो हो । देउचूलीलाई नवलपुरका थारुहरु आफ्नो शिरस्थान मान्दछन् । देउचूलीमा एउटा गुफा छ । त्यस गुफाका देवीलाई थारुहरु कुमारवर्ति माई मान्दछन् । नवलपुरबाट देउचूली जाने बाटोमा कीर्तिपुर नाम गरेको मगर गाउँ छ । नवलपुरका थारु र कीर्तिपुरका मगरहरु मिलेर चैते दशैँ पछिको देवीपूर्णिमाको दिनमा देउचूलीका कुमारवर्ति माईको पूजा गर्दछन् ।
घाटुको गीतमा सप्तगण्डकीलाई सातै जमुना भनेको छ । घाटुको विसर्जनको अवसरमा हिउँचूली, वरचूली, देउचूली र गङ्गाचूलीको देवता र गण्डकी प्रदेशका मुख्य सातवटा घाटहरु र विभिन्न एतिहसिक कोटहरुको गीतैको भाकाबाट पूजा गरिन्छ । सती घाटुको उठान श्रीपन्चमीमा गरिन्छ र वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अथवा चण्डी पूर्णिमाको दिनमा विसर्जन गरिन्छ । यो अवधी भन्दा बाहिर सती घाटु गाउन र नाच्न पाइँदैन ।
बाह्रमासे घाटु बाह्रै महिना बाह्रै काल गाउन नाच्न पाइँन्छ । त्यसकारण यसलाई बाह्रमासे घाटु भनेको हो । यसो भएतापनि जेठपूर्णे पछि बाह्रमासे घाटु पनि नाच्न हुँदैन भन्ने वाचा छ, किनभने जेठपूर्णे पछि ता सबै खेतीपातीमा लाग्न पर्ने हुन्छ । घाटुको गीत पुरानो नेपाली भाषामा रचिएको छ । यसमा अवधी भाषको प्रभाव परेको पाइन्छ । गीतको उठान गर्ने गुरु बा, मादले , अरु सहयोगी र दर्शकहरु सबै बसेका हन्छन् । घाटुनीहरु उठ्दै बस्दै गरेर नाच्दछन् ।
कृष्णचरित्र र सोरठी जस्तो चट्किलो हुँदैन तर घाटु रसिलो हुन्छ।हिउँद लागेपछि फागुन-चैतमा आइरे कुकुरको घाँडो नबज्ने वन जङ्गल र घाटुको राग नगाउने गाउँको शोभा हुँदैन भन्ने कहावत छ । यसबाट घाटुको गरिमा र महत्त्व राम्ररी स्पष्ट हुन्छ ।
ठाउँ र समुदाय अनुसार घाटुको कथामा केही भिन्नता पाइन्छ । कतै पश्रामु राजा- यम्फावती रानी भन्छन् । कतै परशुराम रजा- अम्वावती रानी भन्छन् । तिनका बालकृष्ण नामको छोरा हुन्छ । छोरा जन्मे पछि चारै दिशा वैरी उठ्छ र पश्रामु राजा लडाइँमा जान्छन् । लडाइँमा पश्रामु राजाले ईन्द्रासन (वीरगति) प्राप्त गरेपछि राजाज्यूको पगरी साथमा लिएर यम्फावती रानी सती जान्छिन् र सती घाटुको समापन हुन्छ ।
घाटु सेलाउँदा गाउँ बाहिर चण्डीथान बनाएर त्यहाँ बाँसको लिङ्गो ठड्याएर विसर्जन गरिन्छ । वैशाख पूर्णेमा घाटु सेलाएपछि यथा समयमा खुवा खाएर रमाइलो गर्दछन् । यतिसम्ममा वर्खा लागि सकेको हुन्छ र त्यसपछि सबै खेतीपातीमा लाग्दछन् । घाटु नेपालको आफ्नै धर्ती, आफ्नै आकाश र आफ्नै परिवेश्मा नाचिने नृत्य नाटिका हो । घाटु नृत्य नाटिकाले नेपालको हिमाल, पहाड र मधेशलाई एक ठाउँमा जोडेको छ । आफ्नै हिमाल, आफ्नै डाँडाकाँडा, नदी नाला, घाट र कोटहरुलाई पूजेको छ । घाटुमा नेपाली जनजीवन प्रतिविम्वित भएको छ ।
यसरी घाटु नृत्य नाटिकामा नेपालको स्थानीयता छ, अपनत्व छ । स्थानीयता र अपनत्व भने कै राष्ट्रीयताको भावना हो ।त्यसकारण घाटु न्रुत्य नाटिकालाई नेपाली राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत भएको दैवीशक्तियुक्त लौकिक नृत्य नाटिका हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यस किसिमको घाटु नृत्य नाटिका हाम्रो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको एउटा अनुपम नमूना हो । अत: यस्तो अनुपम अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन हुन अत्यावश्यक छ ।
तस्वीर : टान नेपाल (TAAN Nepal)
CategoriesCulture Tagsघाटु नाच
Previous PostPrevious लोप हुने अवस्थामा गुरुङ र घले समूदायमा प्रचलित घाटु नाच
Next PostNext नेपाल इतिहासमा मगर
Archives Select Month November 2021 (3) October 2021 (3) September 2021 (2) July 2021 (1) June 2021 (7) February 2021 (1) January 2021 (2) December 2020 (6) October 2020 (1) April 2020 (1) March 2020 (2) November 2019 (4) October 2019 (2) September 2019 (2) August 2019 (2) July 2019 (9) June 2019 (8) May 2019 (20) April 2019 (10) October 2018 (12)
Categories Select Category About Us (1) Activities (3) Culture (29) Discourse (48) History (77) Language (24) Literature (1) News (1) Publication (9) Uncategorized (25) Videos (1)